बेनिटो ओल्मो। एल ग्रान रोजोको लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
फोटो: बेनिटो ओल्मोको फेसबुक।
बेनिटो ओल्मो (Cádiz, १ 1980 .०) अब एक नयाँ उपन्यास जारी गर्दैछ। यसको शीर्षक ठूलो रातो र उहाँ विश्वासयोग्य रहन वा वाचकहरूको क्याडिज लेखक र पटकथा लेखकको फराकिलो दायरा विस्तार गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। उनी पनि यसका लेखक हुन् हजार चीजहरू जुन मैले तपाईंलाई हराउनु अघि भन्नुभएन, सूर्यफूल दुर्घटना o कछुवा चाल, जोसँग एक फिल्म अनुकूलन पनि हुनेछ। ऊ धेरै लामा ट्रामा / एरागेन नेग्रो उपन्यास पुरस्कार वा तेस्रो सान्ता क्रुज पुरस्कार जस्ता धेरै साहित्यिक पुरस्कारहरूको लागि फाइनल हो।
मलाई यो प्रदान गरिएको छ साक्षात्कार जहाँ उनले हामीलाई यो नयाँ कथाको बारेमा बताउँदछन्, उनको मनपर्ने लेखकहरू र पुस्तकहरू र हामीसँगको प्रकाशन दृश्यको बारेमा पनि। म वास्तवमै बिताएको समयको कदर गर्छु र तपाईंको दयालु
बेनिटो ओल्मो - अन्तर्वार्ता
बेनिटो ओल्मो: मैले सानो छँदा पढ्न थालें, किनकि म घरमा ठूलो र राम्ररी पोषण गरेको पुस्तकालयको भाग्यशाली थिएँ। म कथा लेख्न को लागी, मुख्य रूप मा हास्य को रूप मा, लेख्न उफ्रिनु भन्दा पहिले।
BO: म स्टीफन किंग उपन्यासहरूले धेरै प्रभावित भएँ। यसले व्यावहारिक रूपमा उनीहरूलाई भस्म पार्यो। यद्यपि यो वास्तविक झटका मेरो हातमा पर्दा आयो सबै जासूसहरूलाई फ्लागन भनिएको छAndreu Martín र Jaume Ribera द्वारा। म त्यो पुस्तक हुँ जसले मेरो पढ्ने प्रेमको पुष्टि गर्दछ।
BO: म छनौट गर्दछु Andreu मार्टिन, किनभने उहाँ लेखकको प्रकार हुनुहुन्छ जस्तो म हुन चाहन्छु: इमानदार, मेहनती र धेरै प्रशंसक।
BO: मलाई भेट्न मन परेको थियो शर्लाक होम्स र जाँच यदि उनको प्रसिद्धि औचित्य थियो।
BO: दुबै को लागी तपाईले कफी मिस गर्न सक्नुहुन्न।
BO: म लेख्छु बिहान, धेरै चाँडो। यो दिनको मेरो सृजनात्मक क्षण हो, जब म हातको कहानी बाहेक अरू कुनै कुराको बारेमा सोच्दिन। मसँग एक राम्रो, शान्त कार्यालय छ जहाँ मलाई लाग्छ कि म हपर पेंटि inमा छु।
AL: हामी तपाईंको भर्खरको उपन्यासमा के पाउँछौं, ठूलो रातो?
BO: एक अपराध उपन्यास तारांकितaक्याडिज जासूस र एक टर्की किशोर यसले हामीलाई शहरको ईन्ट्राईलहरू देखाउँदछ फ्रैंकफर्ट.
AL: थप साहित्यिक विधाहरू?
BO: आफैमा पनि एक साहित्यिक विधा नहुनु म स्टोरीटेलका लागि श्रव्य लेखन गर्छु। म यो ढाँचाको बारेमा उत्साहित छु, किनकि यसले मलाई पढ्नलाई समृद्ध गर्ने संसाधनहरू विस्तार गर्न र परिमार्जन गर्न अनुमति दिँदछ। मेरो भर्खरको अडियो श्रृंखला भनिन्छ वन्डरल्याण्ड.
BO: म के लेख्दै छु भनेर कुरा गर्न मन पराउँदिन। म यो गर्न चाहान्छु जब यो समाप्त हुन्छ। पढ्ने सन्दर्भमा, मैले भर्खरै समाप्त गरें धूर्त मानिसहरु, जोन कोनोली द्वारा, र मैले सुरू गरेको छु खाली मानिसहरुगुइलर्मो डेल टोरो द्वारा।
BO: प्रकाशन संसारमा राम्रो सम्पादकको अभाव छ जो राम्रो कार्यहरू पत्ता लगाउन र उत्तम सम्भावित अवस्थामा तिनीहरूलाई प्रकाशन गर्न सक्षम छन्। मारियो मुच्निकले भनेझैं प्रकाशकहरू लेखापालले प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्। आजकल, सामाजिक नेटवर्कमा तपाईका अनुयायीहरूको संख्या तपाईको लेखनमा कत्तिको राम्रो छ भन्दा बढि फरक पार्दछ। भाग्यवस, पाठक अझै पनी अन्तिम शब्द छ।
BO: म प्रभावित हुन को लागी कोसिस गर्दछु, यद्यपि यो सजिलो छैन। न त म महामारीमा सेट कथाहरू पढ्न चाहान्छु, लेख्न दिनुहोस्। के चाहानुहुन्छ es उसलाई पछाडि छोड्नुहोस् धिक्कारेको समय र हामी भाइरसले हामीबाट चोरेका सबै चुम्बनहरू र अug्गालाई पुनःप्राप्त गर्न सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » बेनिटो ओल्मो। बिग रेडका लेखकसँग अन्तर्वार्ता
गेब्रियल सेलया। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। कविताहरु